Kaominina Anjozorobe : mitodika amin’ny fampandrosoana ny ben’ny Tanàna (NewsMada) | AEMW
Kaominina Anjozorobe : mitodika amin’ny fampandrosoana ny ben’ny Tanàna (NewsMada)
Manana fokontany 24 ny kaominina an-tanàn-dehibe Anjozorobe, distrika Anjozorobe, faritra Analamanga. Mitodika amin’ny fampandrosoana ny paikan’ny ben’ny Tanàna, ny Dr. Andriamanantsoa Lova. Dinidinika.
Gazety Taratra (*): Inona ny mampiavaka an’Anjozorobe?
Dr. Andriamanantsoa Lova (-):Toy ny toerana ambanivohitra rehetra, hita ato amin’ny kaominina iadidiko ny karazam-pambolena maro, toy ny fambolena vary, ny tongolobe, ny mangahazo, ny legioma, ny fiompiana kisoa, akoho amam-borona, sns. Anisan’ny mamatsy saribao avy amin’ny hazo kininina mankany Antananarivo koa aty an-toerana. Manana ala voajanahary ny faritr’Anjozorobe ary manao ezaka manokana hanitarana sy hikajiana ny simba na may amin’ny alalan’ny fambolen- kazo.
*Inona ny fandaharanasam-pampandrosoana any an-toerana?
–Anisan’ny mahazo tombontsoa amin’ny fandaharanasa Formaprod sy ny Prosperer izahay. Miompana amin’ny fanofanana ny tantsaha hahafehy ny teknikam-pambolena na fiompiana samihafa sy ny fitantanana ny Formaprod. Mifantoka amin’ny fampifandraisana ny mpamokatra sy ny mpandraharaha, fitodihana amin’ny tsena sy ny filàn’ny mpanjifa ary ny fanamorana ny fikarohana lalam-barotra kosa ny Prosperer. Mikasika ity farany, vao nampahafantarina taty an-toerana, herinandro vitsy lasa izay ny mombamomba azy, ary anisan’izany ny famokarana mangahazo ataon’ny orinasa tsy miankina iray, ny famokarana zava-pisotro avy amin’ny garana, eo koa ny asa tanana, sns.
*Manao ahoana ny hampiasana ilay vola avy amin’ny CLD?
–Nanapa-kevitra ny kaominina 19 ao anatin’ny distrika Anjozorobe fa tsy maintsy hita soritra isaky ny kaominina ny hampiasana io vola io. Efa tafatsangana ny vaomiera CLD Anjozorobe, tarihin’ny solombavambahoaka, ary mandrindra ny fitantanana ny lehiben’ny distrika. Tombanana 10 tapitrisa Ar isaky ny kaominina ny hitsinjarana an’io vola io. Niraisanay ben’ny Tanàna ny hividianana fitaovana hanamboarana na hanatsarana fotodrafitrasa, toy ny sekoly, tobim-pahasalamana, tetezana, sns. Tanjona ny hahazoan’ny vahoaka ankapobeny tombontsoa aminy. Tsy mbola fantatra anefa ny fotoana tena ahatongavan’io vola io any amin’ny distrika.
*Manao ahoana ny fampidiran-ketra?
–Ezaka vaovao hataonay ato amin’ny kaominina, ny fanomezana fankatoavana ny trano efa niorina, nefa tsy mbola nisy fahazoan-dalana. Anisan’ny antony nahatonga izany ny olana amin’ny fananan-tany sy ny vesatra amin’ny fikarakarana azy. Hanomboka amin’ny taona ho avy ny fakan-ketra amin’ny tany sy ny trano (IFT sy ny IFPB).
Manampy izany, misy ankehitriny ny hetsika manokana “fitsarana tany faobe”, iaharana amin’ny fitsarana tany mitety vohitra (TTA) eto Anjozorobe, hanamorana ny fanomezana titra amin’ny fitompoana ny tany.
← Ambatovy : nomena voninkazo « orchidée » 105 Andasibe (NewsMada)
Projet d’exploitation minière : Des rumeurs de menaces terroristes à Soamahamanina (Midi-Madagascar) →